Ms. Askira waa Aasaasaha iyo Agaasimaha Fulinta ee Hindisaha Horumarinta Haweenka Borno (BOWDI), NGO oo fadhigiisu yahay Maiduguri, Gobolka Borno, Nigeria, oo ka shaqeeya xoojinta haweenka iyo dhalinyarada iyada oo loo marayo waxbarashada, u doodista, sugnaanta cuntada, iyo waxqabadyada ilaalinta si ay u noqdaan kaqeybgalayaal firfircoon ee dhiirrigeliya nabadda iyo dulqaadka.
Ms. Askira waa Xogheyaha Qeybta Nigeria Shabakadda Hoggaaminta Haweenka Afrika, Dhaqdhaqaaq aasaasi ah oo ka kooban shabakad ka badan 500 haween ah oo ku baahsan qaaradda oo ka shaqeynaya sidii loo gaari lahaa Ajandaha Afrika 2063 iyo Yoolalka Horumarka Waara ee 2030.
Waxay sidoo kale xubin ka tahay FEMWISE-Afrika, isbahaysi ka shaqeeya kor u qaadista ka hortagga khilaafaadka iyo dhexdhexaadinta guud ahaan Afrika.
Ugu dambeyntiina, Ms. Askira waxay hoggaamisaa barnaamij talo-bixin ah oo hagitaan ah oo loogu talagalay dhallinyarada reer Nigeria, oo ay ku jiraan dhibbanayaasha la badbaadiyay ee Boko Haram. Doorkan, waxay diiradda saareysaa baabi'inta iyo abuuritaanka sheekooyin beddel ah oo wanaagsan dhammaan waqooyi-bari Nigeria.
Ms. Askira waxay haysataa Bachelor of Science Biology oo ay ka qaadatay Jaamacadda Maiduguri iyo shahaadada sare ee waxbarashada ee Kashim Ibrahim College of Education ee Maiduguri, Gobolka Borno, Nigeria. Waxay inta badan kahadli jirtay shirarka iyo shirarka caalamiga ah.